> Resource > iPod > Bedelka iPod playlist in Computer Si fudud
Waa maxay sababta aad rabtid in aad si ay u gudbiyaan iPod playlist in computer?
Weligaa ma kala kulantay mid ka mid ah xaaladahan soo socda halka aad u baahan tahay in ay u guuraan iPod playlist in computer ?
Waxaad la kulantay shil kombiyuutarka, virus computer ama drive failure adag. Ka dib markii reinstalling, waxaad ka hesheen oo dhan playlists on your computer ka lumeen.
Waxaad soo iibsatay kombiyuutar cusub iyo markaas ogaaday music oo dhan, oo ay ku jiraan heeso ka CD-badan, ayaa waxaa ku xayiran on your iPod.
Waxaad aanba hore iPod, waayo, mid cusub. Waxaad weli doonayay in ay gurmad dhammaan faylasha, gaar ahaan playlist ku saabsan jir iPod in computer.
Waxaad ku badbaadi badan playlists udgoon uga dhawaajiyeen oo aad iPod, si aad u doonayay in uu nuqul ka iPod playlist in computer wax qaybsi.
Waa dhibaato qodxan si ay u gudbiyaan iPod playlist in computer cusub, maxaa yeelay, Apple ma la taageero aad u samayn. Nasiib wanaag, weli waxaad u tagi kartaa iPod inay kala iibsiga PC caawimaad. Halkan waa mid ka mid ah kugu habboon. Waa TunesGo Wondershare . Sidaa daraadeed, aad awoodaan si ay u gudbiyaan playlist aad iPod dib ugu PC goobtii. Playlist ka sokow, aad wareejin karaan music, videos, sawiro, xiriirada iyo SMS iyo sidoo.
Bedelka iPod playlist in PC in 2 tallaabooyinka
Hagaha hoos ku qoran wuxuu kuu sheegayaa sida ay u gudbiyaan playlist aad iPod dib ugu PC. Hadda download version maxkamad free of codsigan on your computer. Markaas raac tilmaan.
Tallaabada 1. Daahfurka iPod ay u kala iibsiga PC
First of dhan, abuurtaan iPod si kala iibsiga computer on your computer ka dib markii duuban oo ku rakibidda. Connect aad iPod la your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. Markaas, barnaamijkan wuxuu bilaabaa inuu ogaado aad iPod ka dibna bandhigayaa dhammaan faylasha aad iPod in column bidix ee suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Fadlan soo dajiyo Lugood on your computer.
Tallaabada 2. Save iPod playlist in computer
On column ka tegey, waa in aad ku dhufo "playlist". Markaasaa playlists aad iPod la soo bandhigi doonaa on Murayaad saxda ah. Playlists Dooro in aad isku dayaan in ay u dhoofiyaan si aad u computer. Guji "Dhoofinta in". Marka uu furmo suuqa file browser soo booda, waxaa idinku waajib ah in ay doortaan jidkaa dukaanka si loo badbaadiyo playlists dhoofiyo ah. Ka dib markii in, kala iibsiga iPod in computer bilaabaa inuu ku caawiyo playlist dhoofinta. Ha xusuusan in barkinta aad iPod.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo si buuxda u la jaan qaada oo dhan iPod, oo ay ku jiraan iPod xiriiri macruufka 9/8/7/6/5, shaandheeyn lagu iPod, nano iPod iyo classic iPod. Riix Tech Spec ee TunesGo si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iPods taageeray.